Posted by Rita | 29/09/2009, 10:33
Posted by Rita | 29/09/2009, 10:34
ဖတ်သွားတယ်ဗျ။ ဇာတ်လမ်းပြီးတော့ ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာနဲ့။ ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူး ခံစားရတာ။ ကျောင်းသားတွေဘက်ကနည်းနည်း နေသာပါတယ်။ သူချစ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စွန့်ခွါသွားရတဲ့ တရုတ်ဆရာကြီးမှာသာ…
Posted by Dho-ong Jhaan | 29/09/2009, 10:44
Posted by SDL | 29/09/2009, 11:23
အင်း.. ငယ်ငယ်ကလည်း.. ရာဇ၀တ်မူ မကျူးလွန်ပဲ..နှစ်ရှည် ထောင်ထဲရောက်နေကြတဲ့..နိုင်ငံခြားသားတွေ အကြောင်း ကြားဖူး..သိဖူးတယ်.
Posted by K | 29/09/2009, 12:32
မဟုတ်မှ လွဲရော ပိုင်ရှင်က လက်စဖျောက် လိုက်တယ် နဲ့ တူတယ်
Posted by ဆောင်း | 29/09/2009, 14:37
You know, it’s because of money.
Posted by nno | 29/09/2009, 17:00
ဇာတ်သိမ်းလာဖတ်တာ… စိတ်မကောင်းဘူး သူငယ်ချင်းကို မေးကြည့်ပေးဦးမယ်
Posted by မီယာ | 29/09/2009, 23:21
Posted by kz | 30/09/2009, 15:44
I also do think , He had arrested by SB or If that possible back to China .
Posted by Daiku_thu | 01/10/2009, 03:57
Posted by မိုးချိုသင်း | 03/10/2009, 04:04